Kutanga Kumusoro Kwevhiki - Kuchinja Nyika Guta Rimwe Panguva | Martech Zone
Vhiki rino 125 vanhu vanobva kudzinopfuura nyika makumi matatu vakapedza mazuva mashoma vachikurukura maratidziro ekuti Kutanga Kwevhiki kunogona sei kukanganisa hupfumi hwedu. Inonzwika kupenga? Iyo Kauffman Foundation inoda kubheja $ 30 isu hatisi. Vakapa mari yemakore matatu iyo yakabvumidza timu ye StartUp Yevhiki kuti ikure kune vasere vashandi venguva yakazara.
Iri timu diki, richazopa rutsigiro kumazana ezviitiko zveKutanga Kwekupera kwevhiki kutenderera nyika. Akazviita sei? Izvi ndizvo zvaive musangano weKansas City kupera kwevhiki uku. Iri boka raive musanganiswa wekutanga mavhiki junkies uye rookies, mumwe nemumwe wavo aive azvipira kuve anoronga chiitiko kana muchengeti wekutanga dhizaini munharaunda yavo.
Semurongi wemuno, ndakave nemukana wekuchinjana mazano nevamwe vangu vanobva kunzvimbo dzakaita seSingapore, Prague, Spain, Japan, Canada, neAustraila. Kunyangwe paine misiyano yezera netsika, dingindira rinobatanidza raive pachena chishuwo chakajairika chekuwedzera nyika yepasi rose yemabhizimusi. Isu mumwe nemumwe tinotenda kuti ndipo pachave nekugadzirwa kwemabasa kwechokwadi mumakore anotevera.
Imwe yenyaya dzinoshamisa kwazvo yaive yekudzokororwa kwekutanga kweIsrael / Palestine mubatanidzwa StartUp Svondo. Kunyangwe paine runyorwa runotyisa rwezvipingamupinyi uye zvakakomba kuchengetedzeka kunetseka vanopfuura zana veIsrael uye makumi matatu vePalestine vakapedza maawa makumi mashanu nemana pamwechete. Nhaurirano dzaive dzisiri dze zvematongerwo enyika, dzaive pamusoro teknolojia.
Iine mari nyowani kubva kuKauffman Foundation, StartUp Svondo ingawedzera chinangwa chayo chekuunza Chiitiko Chekufungidzira kune Vemabhizimusi. Nepo mabhizinesi chaiwo achibuda kubva muvhiki, Start Up Weekend haisi StartUp Fekitori, iri Bhizinesi Rezvemabhizimusi. Uye isu tinoda vamwe vanamuzvinabhizimusi.
Ndiri kufara nezve mikana yepasirese uye ndiri kutarisira kudzokera kuKansas City gore kubva zvino, kuti ndibatanidzwe zvakare neshamwari, uye ndisangane nemazana evamwe, sezvo chiitiko ichi chiri kukura kubva pa100 kusvika pa1,000. Kusvikira panguva iyoyo, ini ndakatarisana neKutangaUp pano muIndiana. Unoda kudzidza zvakawanda? Enda ku: http://www.startupweekend.org uye http://www.indianapolis.startupweekend.org
Tags: budiriroentrepreneurshipindianaindianapolischigadzirwa chinobudirirakutanga kwevhiki
Kutaura Mumutauro Wevateereri Vako